လုံးဝ အခက်အခဲ ဖြစ်နေတဲ့ သူတွေကို သူမရဲ့ အဝတ်အထည်တွေ စစ်ဘေးရှောင် နဲ့ လိုအပ်တဲ့ နေရာတွေကို လှူဖို့အတွက် အခက် တွေ့နေသော အရာတစ်ခုအား ပြောပြလာတဲ့ ခင်သဇင်…. – Shwe Naung
လုံးဝ အခက်အခဲ ဖြစ်နေတဲ့ သူတွေကို သူမရဲ့ အဝတ်အထည်တွေ စစ်ဘေးရှောင် နဲ့ လိုအပ်တဲ့ နေရာတွေကို လှူဖို့အတွက် အခက် တွေ့နေသော အရာတစ်ခုအား ပြောပြလာတဲ့ ခင်သဇင်….
မြန်မာနိုင်ငံတွင် လက်ရှိ ဖြစ်ပေါ် နေသော လူထူ လှုပ်ရှားမှုများတွင် ပြည်သူ တွေနဲ့အတူ အချို့သော အနုပညာ ရှင်များလည်း တက်ကြွစွာ ပါဝင်ခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ထိုအနုပညာ ရှင်များထဲတွင် သရုပ်ဆောင် ခင်သဇင်လည်း တစ်ယောက် အပါအဝင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမကတော့ နေ့စဉ် ရက်ဆက် လမ်းပေါ်ထွက်ကာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရုံ သာမကဘဲ လိုအပ်တဲ့ နေရာများသို့ သွားရောက် လှူဒါန်းပေးခဲ့ သူတစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။
အမှန်တရား ဘက်ကနေ မားမားမတ်မတ် ရပ်တည်ခဲ့သော ခင်သဇင်ကို တော့ ပုဒ်မ ၅၀၅(က) ဖြင့် တရားစွဲဆို အရေးယူထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ခင်သဇင်တစ်ယောက် ဘေးကင်း လုံခြုံရာနေရာသို့ တိမ်းရှောင် နေရတာဖြစ်ပါတယ်။
သို့သော်လည်း အမှန်တရားအတွက် ရောက်ရာ နေရာကနေ တော်လှန် တိုက်ပွဲ ဝင်နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကိုယ် တတ်နိုင်တဲ့ အခန်းကဏ္ဍကနေ ပါဝင်ဆောင်ရွက် နေပြီး အလှူလေးတွေ လည်း လှူဒါန်း ပေးနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မကြာသေးခင် မိနစ်ပိုင်း လောက်က ခင်သဇင်ရဲ့ လူမှုကွန်ယက်တွင် စစ်ဘေးရှောင်နဲ့ လိုအပ်တဲ့ နေရာတွေကို သူမရဲ့ အဝတ်အထည်တွေ လှူဖို့အတွက် အခက်တွေ့ နေသော အရာတစ်ခုအား ဖွင့်ဟ ပြောပြလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရိုက်ကူးရေးတွေ လုပ်နေရသူ တစ်ဦး ဖြစ်တာကြောင့် သူမရဲ့ ဝတ်စုံတွေ အားလုံးဟာ ဒီဇိုင်းရိုးရိုးတွေ ဟုတ်မနေတဲ့အတွက် လှူဒါန်းဖို့ အကြပ်ရိုက်နေကြောင်း ကိုလည်း အခုလို ရေးသား ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ” စစ်ဘေးရှောင်နဲ့ လိုအပ်တဲ့ နေရာလေးတွေကို အဝတ်ထည်တွေ အားလုံး နီးပါး လှူပစ်ချင်ပါတယ်။
ခက်တာက ဒီဇိုင်း တွေက ရိုးရိုးကြီးတွေမဟုတ်တော့ တော်တော် လှူရမှာ အကျပ်ရိုက်နေပါတယ် 😰အကြံပေးကြည့်ပါဦး… ဘယ်လို လှူသင့်လဲ ဆိုတာ…” ဆိုပြီး ရေးသား ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူတွေ ကလည်း စစ်ဘေးရှောင်နေကြရတဲ့ တိုင်းရင်းသားညီအစ်ကိုမောင်နှမများ ဝတ်ဆင်ရန်
သူတို့မှာ ရှိတဲ့ အဝတ်အထည်တွေကို တတ်နိုင် သလောက် လှူဒါန်းပေးနေကြတာ ကြည်နူးစရာ ကောင်းလှပါတယ်။ အခြားလို အပ်နေတဲ့ နေရာများကိုလည်း ဆက်လက်ပြီး လှူဒါန်းပေးကြ ပါဦးလို့ တိုက်တွန်း လိုက်ပါရစေ။
မရမ်ဆိုင်းနူ ရဲ့ ဗီဒီယိုလေး…
သူမတူ တဲ့ အလှ တရားတွေ နဲ့ ကြည့်မိသူ တိုင်းကို ကြွေစေ ပြန်တဲ့ M SENG LU…